Taariikhda Saxaafadda Soomaaliyeed – Qaybta 1aad | Somali Wiki
Home / Af Soomaali / Taariikhda Saxaafadda Soomaaliyeed – Qaybta 1aad
Posted by: somaliwi in Af Soomaali, Taariikh January 30, 2017	Comments Off on Taariikhda Saxaafadda Soomaaliyeed – Qaybta 1aad 770 Views
Inta aanan u gudagelin si gaara taariikhda saxaafadda Soomaaliyeed aan marka hore si kooban uga hadlo taariikhda saxaafadda adduunka si aan ugu soo xirno taariikhda saxaafadda Soomaaliyeed.
Taariikhda saxaafadda adduunka waxaa lagu tilmaani karaa xilli adag oo baniaadmku u noqotay khibrad, waxaana laga joogaa isku daygeedi ilaa 500 oo sano.
Intii u dhexeysay 1400 – 1700 xilliyadaas oo ay waddamada Yurub ku jireen isbeddellada dhaqanka iyo horuumarka ayuu ka bilawday wargeys gacanta lagu qoray kaasooo ay si gaar ah ganacsatadu isuguna gudbin jireen wararka iyo macluumaadka dagaalka, iyo xaaldaha dhaqaalaha, caadooyinka bulshada iyo ahmiyadda baniaadamka.
Makrii ugu horreysay ayaa wax la dhihi karo wuxuu wargeys lagu daabacay dalka Jarmalka dabayaaqadii 1400, wuxuuna ahaa warside ay ku qoran yihiin warar iyo macluumaad. Waxyaabaha uu qorayay qaarkoodna waxay ahaayeen waxyaabo kicinaya xasaasiyad.
Sidaad ognahayba wargeysyadu waxay la bilowdeen oo la jaanqaadeen hannaanka iyo farsamda daabacaadda. Waddamada Yurub gaar ahaan Jarmalka ayaa iska leh fikrada in la soo saaro daabacaaddii u horreysay oo casri ah taasoo lagu magacaabi jiray “Relation,” sanadkii 1605kii.
Goob lagu iibiyo wargeysyada
Belgium ayaa ku xigtay oo iyaduna soo saartay “Nieuwe Tijdingen” 1616kii.
Dalka Faransiisa wargesykii ugu horreeyay waxaa la oran jiray (the Gazette de France) waxaana la soo saaray 1632kii.
Dalka Denmark ayaa markii ugu horreysay isaguna lagu arkay wargeys la magacbaxay (Danish news media) sanadkii 1540s, markaasoo la arkay warqado gacanta lagu qoray oo ay ku qoran yihiin warar iyo warbixinno.
Wargeysyada dalka Ingiriiskuna waxay bilaabmeen qarnigii 17aad. Wargeyskii ugu horreeyay England waxaa la daabacay 1641kii. Haseyeeshee ereyga (word newspaper) lama diiwaangelinin ilaa 1670kii. Wargeys maalinlihii ugu horreeyaya wuxuu ka soo baxay dalkaas Ingiriiska 1690kii
Dalka Ingiriiska waxaa iyaguna markii ugu horreysay soo baxay (Sunday newspaper iyo Sunday Monitor) oo la daabacay sanadkii 1780. Sidaas ayayna sanadba sanadka ka dambeeyaa u soo korayeen wargeysyada Ingiriiska.
Intii u dhexeysay 1640 iyo xilligii Ingiriiska boqortooyadiisii dib isugu soo celinayay waxaa laga soo saaray dalka Ingiriiska in ku dhow 30,000 oo warqad-wareed iyo wargeysyo ayaa la daabacay, qaarkoodna maanta waxaa laga heli karaa matxafka Ingiriiska.
Hase ahaatee wargeys sax ah waxaa dalka Ingiriiska laga soo saaray 1666kii, kaasoo la oran jiray (London Gazette), wuxuuna ahaa wargeyska rasmiga ah oo la oran karay waa wargeys.
Wargeyskii ugu horeeyay dalka Mareykanka wuxuu kasoo baxay Boston 1690kii, isagoon aanan wax ruqsad ah haysanin, taasoo keentay in dhamaan qorayaashiisii la xirxiro oo jeelka loo diray, waxaana la baabi1yay dhamaan nuqulladiisii. Waxay noqotay in layska illaawo arrimihii wargeyskaas ilaa sannaddii 1845tii oo la ogaaday in makatabadda (Library British) laga helay wax raadad ah ee uu lahaa wargeyskii Boston ee la xiray uu ku badbaaday.
Warqad-wareedkii ugu horreyay ee Boston ee guuleysta wuxuu soo baxay 1704kii, kaasoo bilaabay nin la oran jiray John Campbell oo madax xafiis boosto. Warqad-wareeddan waxay ahayd ahayd mid ay dhaqaalo ahaan ay taageerto xukuumaddii isticmaarka , hase ahaatee muddo kaddib waxaa tijaabadaas ku yimid fashal, iyadoo dadka ay gaareysay ay aad u yaraareen aadna u koobnaayeen.
Waxaa kaloo la sheegay iney laba kale warqadahaas ah ay ka soo muuqdeen Philadelphia iyo New York sanadkii 1720kii, kaddibna aayayar bay u sii abuurmeen.
Xilliyadii dagaalladii isbeddeldoonka ilaa labaatameeyo warqad-wareed baa ka soo baxayay dhammaan meelihii la gumeysanayay, walaow ay magaalooyinka Massachusetts, New York iyo Pennsylvania ahaayeen bardhaxaadka daabacaadda dalka Mareykanka oo dhan muddo sanooyin ah.
Sawire: Dan Kirwood
Qoraallada warqad-wareedayda gumeysigu waxay inta badan ahaayeen kuwa ha soo horjeeda kuwa wada dacaayadaha kacaanka, waxayna ahaayeen xoogaga muhiim ah oo saameyn ku yeeshay ra`yiga dadweynaha iyo in wadahadal lala galo gumeysiga Ingiriiska iyo dib u heshiisiin, ka dibna la qaato xornimo buuxda.
Markii uu dagaalkii dhammaaday dabayaqadii 1783, wargaysyadii waxay gaareen 43 wargays. Daabacaaddu waxay ciyaartay kaalin muhiim ah markii laga hadlayo arrimana muhiimka u ah qaranka cusub ee Mareykanka. Waxaa bilowday wargaysyo dhowr ah oo ka hadlaya dhamaan dhinacyada ra`yiga siyaasadda.
Daabacaaddii u horreysay ee wargeys Carbeed, kuna qoran af-carbeed iyo af-turkish ayaa la oran jiray oo ku qoran (Jurnal al-Iraq), kaasoo ka soo muuqday magaalada Baqdaad sanaddii 1816kii.
Dalka Masaarida magaalada Qaahhira ayaa iyaduna waxay ka bilowday daabacaadda laba wargeys sanadkii 1820s, ka dibna waxaa ku xigsadaya dalal kale ayaa iyaguna bilaabay iney daabacaan wargeysyo sida:
Aljeria sanadkii 1847kii
Lubnaan – Beirut sanakdii 1858kii.
Tunis- Damascus iyo Tripoli- Libya sanakdii 1860kii,
Sanca – Yeman sanadkii 1879kii.
Maroko -Casablanca sanadkii1889kii.
Sacuudi Caraabiya -Makkah sanadkii 1908.
(Maxmad Cabdulfatax (iibiye wargeysyo iyo buugaag)
ayaa kor u haya cadadkii u horreeyay ee wargeyskii caannka ahaa
ee Al Ahraam)
Dalalka Lubnaan iyo Masar ayaa iyagu hoggaaminayay warbaahinta daabacaadda Carbeed; waxayna kaloo ay hoggaannka u qabteen guud ahaan saxaafadda Carbeed 20kii sano ee qarnigii la soo dhaafay.
Wargeysyadii u horreeyay waxay ka soo muuqdeen dalka Lubnaan magaalada sanadkii 1873kii, iyo wargeyskii caanka ahaa ee al-Ahram, kaasoo si weyn ugu muuqday inuu hoggaanka u qabtay saxaafadda Carbeed oo ilaa iminka jira xooggiisii iyo sumcaddiisii, wuxuuna ka bilowday dalka Masar 1875kii, wuxuuna wargeyskan qarnigii 21aad uu gaaray in suuqa uu soo galo in ka badan nus milyan oo nusqadood.
Waddmada carbeed ee saliidda hodanka ku ah ee Khaliijka ayaa iyaguna daabacaaddooda iyo wargeysyadooda markiiba degdeg sare ugu kacay, iyagoo markaas ka faaiideysanaya khubarrada Carbeed ee aqoonta u lahayd warbaahinta, waxayna shaqaaleysiiyeen sida: Lubnaan, Masar, Jordan, Falastiin kuwaasoo soo saaray wargeysyo maalinle ah oo tayadooda aad u sarreysa. Haddii aan tusaale u soo qaadanno waddamada Qatar, Baxrayn iyo Cumman waxay lahaayeen wargeysyo si fiican u hirgalay ilaa sandkii 1970kii, suuqooda hoos uma dhicin
Sacuudi Caraabiya waxay leedahay wargayska ugu qaddiimsan oo ka hadla dhaqanka waxaan ka mid ah al-Bilad iyo alMadina kuwaasoo suuqa soo galay horraantii 1930ki, iyo wargeyska kalee maalinlaha ah ee Ukaz iyo al-Nadwa oo isaguna banka yimid 1960kii. Horrantii 1960kii, Al-Jazira iyo al-Riyadh oo maalinle ah ayaa ka bilaambay magaalada Riyadh.
Sanadku markuu ahaa 1794tii ayaa daabacaaddii u horreysay ayuu yimid wargeyskii u horreyay ee daabacan Afrika, wuxuuna soo gaaray Freetown dalka Sierra Leone hase ahaatee markiiba waxaa durbadiiba baab`iyay Faransiiska, taasoo la fahmi karo waxa uu uga jeeday Faransiiska taas. Wargeys kale ayaa mar kale yimid sanadkii 1800kii wargeys la oran jiray ( the Sierra Leone Advertiser ).
Previous: Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan
Next: Abaar ka dhacday Muqdisho I930-kii (Magaca Villagio Arab)